Izindaba - Ubuchwepheshe obukhulu kanye namathemba okuthuthukisa uhlelo lwe-lithium yebhethri lokugcina amandla
I-Polaris Energy Storage Network News: I-2017 Urban Energy Internet Development (Beijing) Iforamu kanye ne-Energy Internet Demonstration Project yokwakha kanye nokubambisana Seminar yabanjwa ngoDisemba 1, 2017 eBeijing. Ntambama yenkundla yezobuchwepheshe, uJiang Jiuchun, umqondisi weNational Energy Active Distribution Network Technology R&D Center wethule inkulumo engqikithini: ubuchwepheshe obukhulu bezinhlelo zokugcina amandla ebhethri.
UJiang Jiuchun, Umqondisi weNational Energy Active Distribution Network Technology R&D Center:
Ngikhuluma ngokugcinwa kwebhethri. Inyuvesi yethu yaseJiaotong ibilokhu igcina amandla kagesi, isuka kuzinhlelo zamandla nezimoto zikagesi ziye ezokuhamba ngojantshi. Namuhla sikhuluma ngezinye zezinto esizenzayo ekusebenziseni uhlelo lwamandla.
Izikhombisi-ndlela zethu zokucwaninga eziphambili: eyodwa yigridi encane kanti enye isebenzisa ibhethri. Ekusetshenzisweni kwebhethri, izimoto zokuqala zikagesi esazisebenzisa sisebenzisa ukugcinwa kwamandla kugesi.
Ngokuphathelene nendaba ebaluleke kakhulu yokugcina amandla ebhethri, udaba lokuqala ukuphepha; okwesibili kungukuphila isikhathi eside, bese kuba impumelelo ephezulu.
Ezinhlelweni zokugcina amandla, into yokuqala okufanele uyicabangele ukuphepha, bese kusebenza kahle. Ukubambelela ekusebenzeni kahle, isilinganiso sabaguquli, kanye nesikhathi sokusebenza, kanye nokusetshenziswa kwamandla ngemuva kokuncipha kwebhethri, kungenzeka kungabi yinkinga enqunyelwe ezimweni eziningi. Izinkomba ukuchaza, kepha kufanele kubaluleke kakhulu ukugcinwa kwamandla. Siyethemba ukuthi ngezinto eziningi, singayixazulula inkinga yempilo ephephile kanye nokusebenza kahle kakhulu. Uhlelo lokugcina amandla olujwayelekile kanye nohlelo lokuhlaziywa kwamakhadi ngesimo sebhethri lusetshenziswa ezimotweni zikagesi kanye nezinhlelo zokuhamba zomphakathi.
Njengamanje, ukusetshenziswa kwezinhlelo zokulondolozwa kwamandla, abalawuli be-node namabhokisi wokusabalalisa anobuhlakani asetshenziswa yiwo wonke umuntu, kuthuthukisa umnotho jikelele nokuzinza kohlelo, kuthuthukisa inani eliyisisekelo labahlanganisi bohlelo, futhi kungaba ukufinyelela okuhle emafwini ipulatifomu.
Lolu uhlelo lokuhlela lwamandla oluphakathi nendawo. Lesi sakhiwo se-hierarchical senziwe sacaca kakhulu namhlanje ekuseni, futhi singafinyelela ukuhleleka okuhle kwesikhathi eside kwezilimo zamandla wokugcina zamandla ahlanganisiwe nama-Microphidids ngokusebenzisa abalawuli be-node abaningi.
Manje senziwa kwekhabethe elijwayelekile lokuhambisa amandla elijwayelekile. Lesi yisici esiyisisekelo sekhabethe lokuhambisa amandla. Inemisebenzi ehlukahlukene, njengokushaja nokukhipha imisebenzi, ukuvikelwa okuzenzakalelayo, nemisebenzi yokubonisa. Lokhu kuyimishini ejwayelekile.
Isilawuli se-node sisebenzisa imishini yangaphakathi yokulawula amandla endawo, imisebenzi yokuqoqwa kwedatha eyinhloko, ukuqapha, ukugcinwa, amasu wokuphatha ukwenziwa nokulayisha. Kunenkinga lapha edinga ucwaningo olunzulu nolunzulu ngesilinganiso samasampula edatha nesikhathi sesampula yedatha lapho idatha ilayishwa. Ngale ndlela, ukuhlaziywa kwedatha yebhethri ngemuva kwebhethri kuyenziwa, futhi ukugcinwa kwebhethri kuguqulwa kube ukulungiswa okuqondayo. Yenza umsebenzi othile, ekugcineni, ukuthi likhulu kangakanani inani lamasampula, noma lishesha kangakanani isitoreji, ukuchaza ngokuphelele isimo samanje sebhethri.
Uma ngishayela imoto kagesi, uzothola ukuthi izimoto eziningi zikagesi zisesimweni esivame ukuguquka futhi sifinyelele. Eqinisweni, ukugcinwa kwamandla kubhekene nenkinga efanayo ezinhlelweni zokugcina amandla kagesi. Siyethemba ukuyixazulula ngemininingwane. Sinosayizi wesampula we-BMS ofanele.
Ake ngikhulume ngokugcina amandla okuguquguqukayo. Wonke umuntu uthi angikwazi ukukwenza amahlandla ayi-6,000, futhi angasetjenziswa amahlandla ayinkulungwane emotweni. Kunzima ukusho. Ungayisiza njengohlelo lokulondolozwa kwamandla, oluthi izikhathi eziyizi-5,000. Lingakanani inani lokusebenzisa, ngoba ibhethri ngokwalo linenkinga enkulu, ukwehla kwebhethri kuhleliwe phakathi nenqubo yokuwohloka komnotho, ibhethri ngalinye lehla ngokuhlukile, futhi umehluko phakathi kwamaseli owodwa uba munye futhi uhlukile kakhulu Ukungalingani komkhiqizi ukwehla kwebhethri nakho kuhlukile. Leli qembu lamabhethri lingasebenzisa amandla amangaki namandla atholakalayo? Le yinkinga edinga ukuhlaziywa ngokucophelela. Isibonelo, lapho izimoto zikagesi zisetshenziswa njengamanje, zisetshenziswa zisuka ku-10 ziye kuma-90%, kanti ukubuyiswa kwemali kungasebenzisa kuphela ama-60% kuye kuma-70% kuye ngezinga elithile, okufaka inselelo enkulu ekugcineni kukagesi.
Singakwazi ukusebenzisa iqembu ngokuhambisana nomthetho wokubola ukwenza ukuyekethisa, kukhulu kangakanani ukukhetha okulungile ukuze usebenze kahle futhi usebenze kangcono, sethemba ukuthi sizolihlukanisa ngokomthetho wokuwohloka kwebhethri, amagatsha angama-20 njengegama ilungile ngokwengeziwe noma i-40 ifaneleke ngokwengeziwe, okwenza ibhalansi phakathi kokusebenza kahle kanye ne-elekthronikhi yamandla. Ngakho-ke senza okuthile ngokugcinwa kwamandla okuguquguqukayo, okubuye kube yiprojekthi yethu yokwenza le nto. Vele, ikhona indawo engcono yokuyisebenzisa kumakhasethi. Ngicabanga ukuthi ukusetshenziswa kwamakhasino kunenani elithile kule minyaka emibili edlule, kodwa kufanelekile ukukusebenzisa esikhathini esizayo, kodwa futhi cabanga ngokusebenza kahle kokushaja nokuzikhipha, lapho inani lentengo lehla ibhethri, Kunezinkinga ezithile ngokushona. Ukuhlelwa kweqembu okuvumelana nezimo kungaxazulula izinkinga ezinkulu. Olunye uhlobo lokuphakama okuphezulu kunciphisa izindleko zohlelo lonke. Okukhulu kakhulu kungathuthukisa isilinganiso sokusetshenziswa.
Njengebhethri elalisetshenziswa emotweni eminyakeni emithathu kamuva, ukwehla kungaphansi kwama-8%, kanti izinga lokusebenzisa lingama-60% kuphela. Kungenxa yomehluko wayo. Uma wenza amasethi ama-5 wesilinganiso sokusebenzisa, ungafinyelela ku-70%, ongathuthukisa isilinganiso sokusebenzisa. Ukuhlanganisa amamojula webhethri ndawonye kungathuthukisa ukusetshenziswa kwebhethri. Ngemuva kokulondolozwa, ukugcinwa kwamandla kukhuphuke ngama-33%.
Uma ngibheka lesi sibonelo, ngemuva kokulinganisa, ingakhuphuka ngo-7%, ngemuva kokuhlelwa okuguqukayo, ngakhuphuka ngo-3.5%, kanti ukulinganisa kungenyuka ngo-7%. Ukuqoqeka kweqembu okuvumelana nezimo kungaletha inzuzo. Eqinisweni, isizathu sokwehla kwebhethri labakhiqizi abahlukile sehlukile. Kuyadingeka ukwazi kusengaphambili ukuthi leli qembu lamabhethri lizoba yini noma ukuthi ukusatshalaliswa kwepharamitha kuzoba yini, khona-ke uzokwenza ukusebenzisa okuhlosiwe.
Lesi yisikimu esamukelwe, imodyuli enamandla aphelele azimele, ayilungele ukusetshenziswa kwamandla aphezulu.
Ingxenye yamandla module ilawulwa ngokuzimela yi-yamanje. Lo mbuthano ulungele amandla aphakathi nendawo naphakeme futhi nokusetshenziswa okuphindaphindiwe. Lesi yisisombululo sokugcina amandla ebhethri seMMC esifanele igesi ephezulu namandla.
Futhi mayelana nokuhlaziywa kwesimo sebhethri. Ngaso sonke isikhathi bengithi umthamo webhethri awuhambelani, ukwehla kuhleliwe, ukuguga kwebhethri akuhambelani, futhi umthamo nokumelana kwangaphakathi kuncishiswa kakhulu. Usebenzisa ipharamitha ukwenza uphawu, okuthe xaxa usebenzisa umthamo nokumelana kwangaphakathi. Uma ufuna ukuthola indlela yokugcina ukungaguquguquki, kudingeka uhlole umehluko we-SOC yebhethri ngalinye, ukuthi ungaluhlola kanjani i-SOC lwalesi seli elilodwa, bese ungasho ukuthi ibhethri leli alihambisani nokuthi lingakanani amandla amakhulu . Ungayithola kanjani i-SOC eyodwa ngokugcina ibhethri ngokusebenzisa i-SOC? Indlela yamanje ukubeka i-BMS ohlelweni lwebhethri futhi ulinganise le-SOC online ngesikhathi sangempela. Sifuna ukuyichaza ngenye indlela. Siyethemba ukuhambisa imininingwane eyisibonelo ngemuva. Sihlaziya i-SOC yebhethri nebhethri ngemininingwane engemuva. Ngakho-ke, yenza kangcono ibhethri ngalesi sisekelo. Ngakho-ke, sethemba ukuthi idatha yebhethri yemoto, hhayi idatha enkulu, iyipulatifomu yedatha. Ngokufunda ngomshini kanye nokumbiwa phansi, imodeli yokulinganisa ye-SOH inwetshiwe, futhi isu lokuphatha lokukhokhiswa okugcwele kanye nokukhishwa kohlelo lwebhethri lunikezwa ngokususelwa emiphumeleni yokulinganisa.
Ngemuva kokuqhamuka kwedatha, kukhona enye inzuzo, ngingenza isexwayiso kusenesikhathi sempilo yebhethri. Imililo yebhethri isenzeka kaningi, futhi uhlelo lokugcina amandla kumele luphephe. Siyethemba ukwenza imininingwane yesikhathi sangempela kanye nokwexwayisa kwangaphambi kwesikhathi nangesikhathi eside ngokuhlaziywa kwedatha yangemuva, thola izindlela zesikhashana ze-inthanethi zesikhathi esifushane nezesikhathi eside ngezingozi zokuphepha ezingaba khona, futhi ekugcineni sithuthukise ukuphepha nokwethembeka kohlelo lonke.
Ngalesi, ngikwazi ukufeza izici eziningana ngesilinganiso esikhulu, eyodwa ukwandisa isilinganiso sokusetshenziswa kwamandla kohlelo, okwesibili ukwandisa impilo yebhethri, kanti okwesithathu ukuqinisekisa ukuphepha, futhi lolu hlelo lokugcina amandla lungasebenza ngokuthembekile .
Ngidinga idatha engakanani ngiyilayisha ukuze ngihlangabezane nezidingo zami? Ngidinga ukuthola ibhethri elincane kunazo zonke elihlangabezana nesimo sebhethri. Le mininingwane ingasekela ukuhlaziywa ngemuva, idatha ayinakuba yikhulu kakhulu, inani elikhulu ledatha empeleni likhulu kakhulu kulo lonke inethiwekhi A umthwalo. Amakhulu ama-milliseconds, uthatha i-voltage namandla wamanje webhethri ngalinye, elingaphenduki uma ulidlulisela ngemuva. Sithole indlela manje, esingakutshela yona, ukuthi imvamisa yamasampula kufanele ibe yiphi, udinga idatha edlula kanjani Simane sicindezela le mininingwane, bese siyidlulisela kunethiwekhi. Ipharamitha yebhethri ijika liyimitha eyodwa, enele ukufeza izidingo zokuhlaziywa kwebhethri. Amarekhodi ethu wedatha kakhulu, ambalwa kakhulu.
Owokugcina, sithi i-BMS, izindleko zokugcina amandla zibaluleke ngaphezu kwezindleko zamabhethri. Uma ungeza yonke imisebenzi kwi-BMS, awukwazi ukunciphisa izindleko zale BMS. Njengoba imininingwane ingathunyelwa, kungaba khona inkundla yokuhlaziya enamandla ngemuva kwami. Ngiyakwazi ukuyelula ngaphambili. Kukhona amasampula wedatha kuphela noma isivikelo esilula ngaphambili. Yenza ukubala okulula kakhulu kwe-SOC, enye idatha ithunyelwa kusuka ngemuva, lokhu esikwenzayo manje, konke ukulinganisa kwesampula kanye nesampula ye-BMS engezansi, sidlulisa isilawuli se-node yokulondolozwa kwamandla, futhi ekugcineni sidlule kunethiwekhi, amandla isitoreji Isilawuli se-node sizoba ne-algorithm ethile, okulandelayo ngokuyisisekelo ukuthola nokufana. Ukubalwa kokugcina kwenziwa kunethiwekhi yangemuva. Lokhu konke ukwakhiwa kwesakhiwo.
Ake sibheke ukusebenza kanye nokulula kwoshintsho olungqimba olungaphansi, okuyi-equalization, ukutholwa kwamandla we-voltage okuncane nokutholwa ngokulingana kokutholwa kwamanje. Isilawuli se-node isitoreji samandla sitshela okulandelayo ukuthi singabhekana kanjani nakho, kufaka phakathi i-SOC eyenziwa lapha, futhi ingemuva isebenza futhi. Lesi inzwa ehlakaniphile, iyunithi yokulawulwa kwebhethri, isilawuli sama-node ohlakaniphile esivele sisebenza kuyo, esinciphisa kakhulu izindleko zokugcina amandla.
Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion, Iphakethe lebhethri lamandla, I-20ah Lithium Ion Ibhethri, I-Power Lithium Battery Pack, Amaseli ebhethri weLithium Ion, Ibhethri Lithium Lamandla,